Uluhlu lweWebhusayithi Uluhlu lokutshekisha: IiNdawo ezi-67 zokuGqibela zoFunekayo kwiSiza sakho | Martech Zone
Wowu. Ndiyayithanda xa umntu eyila uluhlu lokutshekisha kwi-infographic elula nefundisayo. Uphengululo lweWebhu yase-UK Uyile le infographic ukuphuhlisa uluhlu lweempawu abakholelwa ukuba kufuneka zibandakanywe kuwo onke amashishini 'kubukho kwi-Intanethi.
Ukuze ishishini lakho liphumelele kwi-Intanethi kuya kufuneka uqiniseke ukuba iwebhusayithi yakho ipakishwe! Zininzi iinkcukacha ezincinci ezinokuthi zenze umahluko-kokubini ngokunika abathengi ithemba kunye nokubanika imisebenzi eyongezelelweyo enceda ukuguqulwa kunye nokuphucula amava omsebenzisi jikelele kwindawo yakho. Yenza ishishini lakho lime ngaphandle kwelinye likunike ukhuphiswano.
Olu luhlu lalo naluphi na ubungakanani beshishini kunye neesayithi ze-e-commerce kufuneka zijongwe ngokunjalo. Ndongeze izinto ezimbalwa ngakumbi ukongeza kuluhlu lokutshekisha ekufuneka uzibandakanya!
Ngokubanzi, kunyanzelekile ukuba iwebhusayithi yakho ihlangane nenjongo oyityala kuyo-ukuqhuba ishishini. Oko kuthetha ukuba lonke undwendwe kufuneka luhlale emhlabeni ngenjongo, lufumane ulwazi oludingayo, lukhokelele kuguquko, kwaye likunike izaziso eziyimfuneko kunye nokunika ingxelo oyifunayo ukuze uqhubeke nokwandisa indawo.
Iinkampani ezininzi kakhulu zijolise kakhulu kuyilo. Uyilo oluhle lubonelela ngempembelelo kwangoko ofuna ukuba iindwendwe zibenayo, kodwa ngaphandle kokuba indawo iyasebenza kwaye iqhuba ukuthengisa kwinkampani yakho, ayilufanelanga utyalo-mali. Kwelinye icala, iiarhente zihlala zinganikezeli ngazo zonke iimpawu indawo yakho ekufuneka iphumelele. Ukuguqulwa, ukukhangela, kunye nokwenza intlalontle akufuneki ukuba kongezwe, kufuneka babe ziziseko zayo nayiphi na iprojekthi yewebhusayithi.
Kwiphepha lakho lasekhaya:
Igama leSiza - kulula ukuyifunda kwaye uyikhumbule. Ukongezwa kwesizinda se- .com kusekho ipremiyamu kuba yindlela abakhangeli abasombulula ngayo ukuba uchwetheza kuloo ndawo ngaphandle kolwandiso. Izandiso zedomeyini ezitsha zamkeleka ngakumbi (umz.. Indawo apha!) Ungabi naxhala kakhulu… ngamanye amaxesha indawo emfutshane kunye nolunye ulwandiso inokuba sisisombululo esingalibalekiyo kunedomain ende .com engenangqondo okanye efuna odwi namanye amagama. Uya kumangaliswa yindlela omkhulu ngayo into onokuyifumana kwifandesi yethambeka, nawe. Sukuyekisa ukukhangela kwakho ngobhaliso olutsha.
Akukho mlinganiselo -Umelo lobuchule lweshishini lakho elahlukileyo. ILogo design yinto yobugcisa… efuna umahluko, ukuqaphela nakuphi na ubukhulu, ubuchule bokuyila, imibala ejolise kubaphulaphuli bakho, kwaye mhlawumbi uthumele umyalezo obonakalayo ochaphazela abaphulaphuli bakho. Qiniseka ukuba unxibelelanisa ilogo yakho nokubuyela kwiphepha lakho lasekhaya njengoko uninzi lweendwendwe lusetyenziselwa oko.
I-TagLine - inkcazo emfutshane yento eyenziwa lishishini lakho. Oku akufuneki kube luphawu ngaphandle kokuba uyimveliso yeqhinga elinye okanye inkonzo. Gxila kwizibonelelo zeemveliso zakho okanye iinkonzo, hayi inqaku. Kusika igrisi ilungele ukuKhanya. Kodwa uluhlu lokuphunyezwa kunye nokudityaniswa endaweni ye- Qaphela ukubuya kwakho kutyalo mali lweTekhnoloji kungcono kakhulu Highbridge.
Inombolo yomnxeba - a ukucofa kwaye ezilandelwayo inombolo yefowuni (kwaye uqiniseke ukuba uyaphendula). Ukulandela umkhondo kwenombolo yefowuni kuya kukunceda ubonise imikhankaso engcono kunye nendlela amathemba akufikelela ngayo. Kuba abasebenzisi bahlala behamba, ukuqinisekisa ukuba zonke iinombolo zefowuni likhonkco elinokucofa kubalulekile… ngoku umntu ufuna ukuzama ukukopa kunye nokuncamathisela inombolo yefowuni ngescreen esikwiselfowuni.
Ukubizela isenzo - xelela iindwendwe into ongathanda ukuba bayenze ngokulandelayo kwaye bazakuyenza. Lonke iphepha lesiza sakho kufuneka libe ne-CTA. Ndingacebisa kakhulu ukuba Shayela kuNyathelo iqhosha lasekunene lokuhamba kwakho ngokunjalo. Yenza kube lula, xelela iindwendwe ukuba zenze ntoni ngokulandelayo, kwaye uncede ukuqhuba uhambo lwabathengi.
Ukuhamba ngokuPhezulu - ukhetho olunengqiqo lokufumana amaphepha aphezulu kwindawo yakho. Iimenyu zeMega zinokubonakala zihle, kodwa ngaphandle kokuba ziyilwe kakuhle, uninzi lwezinto onokukhetha kuzo lunokubachukumisa abaphulaphuli bakho. Ndikubonile ukuthethathethana kunye nokutyelelwa kwamaphepha esibhakabhakeni kwiindawo apho sinciphise izinto zokuhamba ukuya kwiqhezu loko babekuko.
Isonka seCrumb Navigation -Nceda iindwendwe zakho zihambe ngokweziqendu. Ukubonelela ngomntu ngeendlela zokunyuka phezulu kubalasele. Imvuthuluka yesonka ikwasisona sixhobo sikhulu sokwenza uphando, ukubonelela ngeinjini zokukhangela ngokuqonda okungcono ulawulo lwabaphathi besiza sakho. Ngokukodwa ukuba uyindawo ye-ecommerce enetoni yamacandelo kunye nee-SKU zemveliso.
Imvelaphi yeVidiyo, umfanekiso okanye isilayida -Bonisa ngokubonakalayo iindawo zokuthengisa ezizodwa kunye nokwahlulahlula. Unokufuna ukubandakanya iibhokisi zokukhanya. Xa unomzobo okanye umfanekiso oneenkcukacha ongathanda ukuba iindwendwe ziwuphicothe, zenze umfanekiso ucofeke apho umfanekiso, igalari, okanye isilayida sandisela kwindawo ekuthengwa kuyo ubuninzi bezindlu kunye namava omsebenzisi.
Uphengululo kunye noBungqina -Ubungqina boluntu kubalulekile. Uninzi lwabakhenkethi bafuna ukuqonda izinto ezimbini ezibalulekileyo… Ngaba ungayenza le nto uthi uyayenza? Bubuphi ubungqina obukhoyo bokuba uyakwazi? Ubungqina bokubhaliweyo bulungile, ividiyo ibhetele nangakumbi. Ukuba uhamba ngombhalo, qiniseka ukufaka ifoto yomntu kunye negama lakhe, isihloko kunye nendawo (ukuba iyasebenza).
Ulwazi olubalulekileyo lweShishini Indawo okuyo kunye nedilesi yakho yeposi zilungile ukuba zingafakwa kwi-footer yakho. Ukuba indawo okuyo ibalulekile kwishishini lakho, unganqwenela ukuyifaka kwiithegi zetayitile yakho, okanye ubonelele ngemephu kuyo yonke indawo ukuze abantu bakufumane ngokulula. Kwakhona kubalulekile iiyure zolwazi kwaye eyona ndlela yokunxibelelana nawe.
Apha ngezantsi kweFold:
Ewe, ngezikrini zale mihla… isongelo sahlukile kwizixhobo zonke. Nangona kunjalo, ubukhulu becala, yindawo yesikrini engabonakali ngokukhawuleza xa umntu evula iphepha lakho kwisiphequluli. Sukoyika iphepha elide… enyanisweni, sivavanyile kwaye sabona amaphepha amade, acwangciswe kakuhle enza ngcono kunokwenza iindwendwe zicofe ukufikelela kulwazi abaludingayo.
Umxholo Wemigangatho Isindululo sakho esisodwa sokuthengisa esichazelwe iindwendwe kunye nokukhangela.
Iimpawu eziphambili - kwiimveliso zakho kunye neenkonzo.
Amakhonkco angaphakathi -Kumaphepha akho angaphakathi kwiwebhusayithi.
bookmarks Amakhonkco ngaphakathi komxholo wephepha ukunceda abasebenzisi ukuba batsibe phezulu okanye behle iphepha ukuze bafumane ulwazi abalufunayo.
Umbhalo osezantsi ephepheni:
Access - ukhangelo lwesibini kumaphepha aqhelekileyo. Itheyibhile yesalathiso ngamanye amaxesha inkulu ngeebhukumaka zokunceda undwendwe lutsibe ukusuka kwelinye icandelo ukuya kwelinye.
Imidiya yokuncokola -Nceda abantu ukuba bazi ngawe ngeendlela zentlalo.
Ingxoxo kwi-Intanethi - unxibelelwano olukhawulezileyo ngelixa undwendwe lusenza uphando. Iincoko ziba zizixhobo ezimangalisayo zokufumana ukufaneleka kunye nezicelo zendlela ngokuxoxa ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo. Kukwakho nabamkeli bexesha lesithathu abasisigxina onokulusebenzisa ukuba awunawo amandla okujonga incoko yakho ngexesha nangaphandle kweeyure zomsebenzi.
Iiyure zomsebenzi -Kunye nendawo okuyo, oku kuyakuqinisekisa ukuba iindwendwe ziyazi ukuba zingandwendwela nini. Iiyure zeshishini zinokubandakanywa kwimethadatha yendawo yakho yeinjini yokukhangela, imikhombandlela, kunye nezinye iinkonzo ezirhubuluza kwindawo yakho.
Iinkcukacha zoqhakamshelwano -Iidilesi zomzimba kunye neze-imeyile, inombolo yefowuni, kunye / okanye idilesi ye-imeyile. Qaphela ukupapasha idilesi ye-imeyile, nangona. Iikhrawuza ziyaqhubeka nokuzichola kwaye ungaqala ufumane ukungena okukhulu kogaxekile.
Ngathi Umxholo - lithini ibali lakho?
Umxholo wephepha elingaphakathi -key imveliso kunye nenkonzo yokunikezelwa ngokweenkcukacha.
Ifom yoqhakamshelwano - liindwendwe ziyazi ukuba zilindele impendulo nini.
Inqaku leCaptcha / Anti-Spam - uya kuzisola ukuba akwenzi njalo! Iibhotshi zihlala zirhubuluza kwiindawo kwaye zingenisa iifom xa zingasetyenziswa.
Umgaqo Wemfihlo Page -Yalela iindwendwe ukuba uza kuyisebenzisa njani idatha oyiqokelela kubo. Unokufuna neMigaqo yeNkonzo ukuba ubonelela ngalo naluphi na uhlobo lwenkonzo kwindawo yakho. Okona kubheja kwakho kukuthetha negqwetha!
Ikhasi le-FAQ Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga neemveliso kunye neenkonzo zakho.
Iphepha leBhlog Iindaba zeenkampani, iindaba zeshishini, iingcebiso, kunye namabali abaxhasi onokwabelana nabaphulaphuli bakho.
Inqaku lokuphawula -Yongeza ukubandakanyeka komsebenzisi.
Ibha yokukhangela - yenza kube lula kubakhenkethi ukufumana ulwazi abalufunayo.
Ibha yecala -Bonisa iiposti zebhlog zakho zamva nje okanye ezaziwa kakhulu, ukubiza isenzo, okanye iiposti ezinxulumene noko.
Ukwabelana ngeendaba zeNtlalo -Ivumela abasebenzisi ukuba babelane ngokulula ngamanqaku akho.
Eminye iMixholo kunye neeNqaku zoYilo zokuCinga:
Ifundeka ngokulula, ifonti ecocekileyo -Khumbula ukuba iifonti ze-serif zivumela abafundi ukuba bafunde umxholo ngokulula. Akuqhelekanga ukusebenzisa iifonti ze-Sans-serif kwiintloko kunye neefonti-fonts zomxholo womzimba.
Amakhonkco ekulula ukuwaqonda Imibala, ikrwela umgca ngaphantsi, okanye amaqhosha aya kukhokelela abasebenzisi ekucofeni kuyo kwaye bangakhathazeki.
Imfono ephendulayo -Ukuyila indawo yanamhlanje ekhangeleka intle kwisixhobo esiphathwayo kufuneka!
Imenyu yeHamburger kwindawo ekuhanjwa nayo
Sebenzisa imibala eyahlukileyo
Sebenzisa umkhangeli wopelo- siyathanda Igrama!
Ukulungiswa kweinjini yokukhangela:
Isihloko kunye nokuhlaziywa kwemeta -Lungiselela isihloko sakho kunye nenkcazo yemeta ukuze abasebenzisi beenjini yokukhangela kunokwenzeka ukuba bacofe.
Indalo yemephu yesayithi ezenzekelayo -Nokungenisa izixhobo eziqhelekileyo kumphathi wewebhu.
Kulula ukuhlaziya ulwakhiwo lwe-URL -Iifutshane, ii-URL ezimfutshane ezingasebenzisi mibuzo kunye namanani kulula ukuba babelane ngazo kwaye zinomtsalane ekucofeni.
Umncedisi kunye nokuHamba:
Ukubamba ngokukhawuleza nangokuthembekileyo - siyathanda Flywheel!
Indawo ezenzekelayo yokugcina indawo- indawo yakho kufuneka ixhaswe ebusuku kwaye kulula ukuyibuyisela. Uninzi lwamaqonga alungileyo okusingqongileyo anikezela oku.
I-SSL / i-HTTPS- qinisekisa indawo yakho inesatifikethi sokhuseleko, ngakumbi ukuba uqokelela ulwazi kubakhenkethi. Oku kunyanzelekile kule mihla njengoko izikhangeli zangoku ziya kuthintela nantoni na ngaphandle komxholo okhuselekileyo.
Iimfuno zobugcisa Umva:
Sebenzisa i-CMS - akunakwenzeka ukuba ukhuphisane neenkqubo zangoku zokulawula umxholo ukubandakanya zonke izixhobo, ukudityaniswa, kunye nokusebenza ngokuzama ukubhala eyakho isoftware yewebhu. Khangela i I-CMS enobuchule obukhulu be-SEO kwaye uyiphumeze kwangoko.
Ikhowudi eyenzelwe ukulayishwa ngokukhawuleza kwephepha Iinkqubo zale mihla zeCMS zibandakanya isiseko sedatha ukugcina umxholo kunye nephepha lewebhu ukubuza kunye nokuboniswa. Ikhowudi entsonkothileyo kakhulu inokubeka umthwalo omkhulu kwiseva yakho yewebhu (ngakumbi xa iindwendwe ngaxeshanye zibetha indawo yakho), ke ikhowudi ebhalwe kakuhle kufuneka!
Umdibaniso weGoogle Search Console
Umdibaniso kaGoogle woHlaziyo -Ngcono nokuba kungangumdibaniso woMlawuli weThegi kaGoogle kunye noHlaziyo lukaGoogle oluqwalaselweyo.
Microformats -I-Schema.org tagging yokuba uGoogle afunde (ngakumbi ukuba uyishishini lendawo), idatha yeKhadi le-Twitter le-twitter, kunye nokumakisha i-OpenGraph ye-Facebook konke kunokukhulisa ukubonakala kwakho xa isiza sakho sabelwana ngaso okanye sifunyenwe kukhangelo nakumajelo asekuhlaleni.
Ukucinezelwa kweendaba - sebenzisa i inkonzo yoxinzelelo yomfanekiso ukukhawulezisa ukulayishwa komfanekiso ngaphandle kokonakalisa umgangatho wemifanekiso.
UkuLazy -Imifanekiso, iaudiyo, kunye nevidiyo akufuneki zilayishe kwangoko kwiphepha lewebhu de zibonwe, zibukelwe, okanye zimanyelwe. Sebenzisa itekhnoloji yokulayisha eyonqenayo (eyakhelwe ngaphakathi WordPress) ukubonisa iphepha lakho kuqala… emva koko ubonise imidiya xa ifuneka.
Ukugcina indawo - xa indawo yakho ihanjiswa, inokukhawuleza. Kodwa uza kuthini xa unamashumi amawaka eendwendwe ngosuku… ngaba iyakuwela okanye iqhubeke?
Izinto ekufuneka uziphephe:
Sebenzisa inkonzo yokubamba ividiyo, musa ukulayisha iividiyo kwiseva yakho
Wuphephe umculo ongasemva
Kuphephe Cofa ukuze ufake iisayithi (ngaphandle kokuba kukho izithintelo ubudala)
Sukuba umxholo, imifanekiso, okanye ezinye izinto
Musa ukwabelana ngolwazi oluyimfihlo
Izinto ezongezelelweyo zilahlekile
Ukubhaliswa kweleta yeendaba- Iindwendwe ezininzi kwindawo yakho azizukulungela ukuthenga kodwa ziya kubhalisela ukuthenga kamva okanye ukunxibelelana. Ukubanjwa nge-imeyile yinto ebalulekileyo kulo lonke ishishini!
CDN - Unxibelelwano lweeNethiwekhi izakukhawulezisa indawo yakho.
Iirobhothi.txt - Vumela iinjinjini zokukhangela ukuba zazi ukuba zinakho ntoni kwaye azikwazi ukwenza isalathiso, kwaye ungayifumana phi imephu yakho yendawo. Funda: Yintoni ukuSebenzisa iiNjini zokuKhangela?
Imihla yokuLungisa - Ukufika kwamaphepha kufuneka ubenayo. Amaphepha okufika endwendwe ngalinye elikhuthazayo nelicofe umnxeba wokuthatha amanyathelo kubalulekile kwimpumelelo yakho yokuguqula. Kwaye amaphepha okufika adibanisa kulawulo lobudlelwane babathengi kunye neqonga lokuthengisa ngokuzenzekelayo lilunge ngakumbi. Funda: Ukufika kweempazamo zePhepha lokuHamba
Iipodcasts -I-Podcasting iyaqhubeka nokuqhuba iziphumo kunye namashishini. Amashishini anokujolisa ekukhokeleni kudliwanondlebe, afake ubungqina kubathengi, afundise abathengi, kwaye akhe igunya kwicandelo labo. Funda: Kutheni iinkampani ziPodcasting
Videos Nokuba amashishini amancinci anokufikelela kwiividiyo ezisisiseko… yonke into oyifunayo yi-smartphone yakho kwaye ulungile ukuba ungaya! Ukusuka kwiividiyo ezichazayo ukuya kubungqina bamakhasimende, uya kumangaliswa ukuba zingaphi iindwendwe ezingazukufunda, kodwa ziya kubukela iividiyo kwindawo yakho yonke. Sukoyika ukuwangenisa kuwo wonke umxholo wakho. Funda: Kutheni iMveliso yeVidiyo ingumba ophambili kunye neendidi ezi-5 zeevidiyo ekufuneka uzenzile
imephu Ngaba ubhalisile kunye I-Google Ibhizinisi Lwam? Kuya kufuneka ukhangele imephu yeshishini lakho. Kwaye ndingakukhuthaza ukuba ufake nemephu kwindawo yakho.
ILogo Simahla Akukho mlinganiselo Ipapashwe ngu- Bar -Ukuba uyinkampani ye-B2B, ukuba ne-logo bar kubalulekile ukuze amathemba abone ukuba ngubani omnye umntu osebenza naye. Sakha i iwijethi yomfanekiso ojikelezayo ngenxa yesi sizathu kanye.
Izibonelelo zeNkulumbuso -Ukuba awuvelisi umxholo weprimiyamu onje nge-infographics, amaphepha amhlophe, kunye nezifundo, uyaphoswa ziindlela ezininzi zokutsala iindwendwe ukuba zinxibelelane nawe ngamaphepha akho okufika! Funda: Ezona ndlela ziPhezulu zokuThengisa zeSizwe sokuKhokela
Imigangatho eshukumayo -Amanqaku akhawulezileyo kuFacebook, iiNdaba zeApple, kunye noGoogle aKhawulezayo amaPhepha eMobile yimiqulatho emitsha, edibeneyo yomxholo ekufuneka upapashe kuwo. Funda: Ngoku sikwiNdaba yeApple
tags: ngathimalunga nathi amaphephaampanti ugaxekileumculo ongasemvablogukuhamba ngesonkaiintlanziisonka isonkazentlanziiiyure zomsebenziUlwazi lweshishiniumnxeba kwisenzobiza iqhosha lesenzoprinceuluhlu lokuhlolaizimvo spamizimvoifomu zoqhagamshelwanoctaIngxoxoigama lethambekaFAQFAQsflashi-google analyticsimaphu kagoogleiimaphu zikagoogleUGoogle ishishini lamImenyu yehamburgerIsilayidi somfanekisoimifanekisoamakhonkco angaphakathiuphando lwangaphakathimaphephalogoilogo rotatorAmanani entengisoIntengiso yePodcastImenyu ephathekayoInkqubo yam yewebhuAccessyeendaba khangeIphepha leendaba libhaliseIncwadana yeendabaingxoxo ekwi-intanethiinombolo yomnxebaPodcastingumxholo wokuqalaumxholo womgangathodesign ezwayoReviewsiirobhothiIimpawu zesizaulwazi lwesizamarblesShishiniukulandela amaqhosha entlalontleamaqhosha okwabelana ngentlalontleispemuUmgca wethegiUbungqinaukukhangela phezuluyokubamba ividiyoiividiyoUluhlu lokujonga lwewebhuUlwazi lweshishini lewebhusayithiIimpawu zewebhusayithiamaphepha amhlophe
I-GetProspect: Fumana iidilesi ze-imeyile ze-B2B kwaye uLawule uLuhlu lweeProspect
Novemba 25, 2016 ngo-1: 36 PM
Ngaphantsi komnye umxholo kunye namanqaku oyilo oza kuthathelwa ingqalelo ndingongeza imihlathi emifutshane kunye neembumbulu kunye neenombolo? Ewe, ezi ziyinxalenye yento eyenza umxholo ucoceke kwaye ufundeke kwiwebhu (inqaku lakho # 31) kodwa ndiyakholelwa ukuba kufanelekile ukukhankanywa okuthile kweli candelo lengxelo yakho.
Okt 25, 2017 ngexesha 11:36 AM
Ndenze uluhlu lokuKhangela kwiWebhusayithi olunobuchwephesha ngakumbi kwaye lunokunceda abaphuhlisi xa kusungulwa indawo entsha: http://nali.org/website-checklist/
Okt 27, 2017 ngexesha 9:32 AM
Enkosi ngokwabelana, uNick!
Novemba 18, 2020 ngo-12: 46 PM
Mangalisayo, iluncedo kakhulu! Enkosi